मुग्लिन – आँबुखैरेनी सडकखण्ड अबरुद्ध गरी भित्ता काटिँदै – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. मुग्लिन – आँबुखैरेनी सडकखण्ड अबरुद्ध गरी भित्ता काटिँदै – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार June 12, 2022
निराज रानाभाट , तनहुँ : पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन – आँबुखैरेनी सडकखण्डको सडक भासिएको ठाउँमा भित्ता काट्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका – ०४ , पावर हाउस नजिक सडक भासिएको ठाउँमा कुनापट्टि भित्ता खन्ने कामलाई जेठ २९ गते , अाइतबार ( आज ) पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
केही दिनदेखि परेको वर्षाका कारण शुक्रबार बिहान सडक भासिएपछि उक्त खण्डमा एकतर्फी मात्रै यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले अहिले साँझ ०५:०० बजेदेखि यातायात बन्द गरी सडक खन्ने काम गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीले जनाएको छ । “ ५ बजेदेखि यातायात बन्द गरेर काम शुरु भएको छ । करिब २ घण्टासम्म काम जारी रहँदा यातायात अबरुद्ध हुन्छ ”, इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक निरज डाँगीले भने ।
सडक डिभिजनले बिहानको समयमा ०८:०० बजेदेखि काम शुरु गर्दा केही बेर सडक अबरुद्ध हुने गरेको छ । अाइतबार ( आज ) बिहान पनि ११ बजेसम्म सडक अबरुद्ध गरी काम गरिएको छ । काम नगरेको बेला एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ । सडक भासिएर एकतर्फी यातायात सञ्चालन हुँदा सवारीको चापले गर्दा जाम हुने गरेको छ । उक्त सडक भासिएर कार र मोटरसाइकल खस्दा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार June 12, 2022 87 Viewed